Olona qeqesho lungcono ukunyusa idesktop yokudlala | Iindaba zeGajethi
Olona qeqesho lungcono ukunyusa idesktop yokudlala
UJose Alfocea | | Videogames
Xa useta i-desktop efanelekileyo, into yokuqala ekufuneka uyiqwalasele yile "yenzelwe ntoni", Oko kukuthi, yeyiphi eyona misebenzi iphambili esiza kuyenza Kuyo, idesktop yomfundi odibanisa ikhompyuter yakhe kunye namanqaku, iincwadi, izinto zokubhala, njl, ayifani nedesktop yomsebenzisi osebenzisa ikhompyuter ukukhangela i-Intanethi kunye nokubukela iimovie azithandayo kunye noluhlu, okanye idesktop yomdlali ogqibeleleyo, ochitha iiyure kunye neeyure phambi kokubek'esweni kwaye unezixhobo ezininzi.
Namhlanje siza kugxila kolu hlobo lokugqibela lomsebenzisi, umsebenzisi we-gamer, kwaye siza kukunika ezinye Izitshixo ezivumela ukudala indawo yokudlala elungileyoUkuya kwimiba efana netafile uqobo, izinto esiza kuzilungisa kuyo, kunjalo, usihlalo, ukulibala okukhulu kodwa okuyintsika ebalulekileyo yedesika nganye yokudlala. I-Ergonomics kunye nokuthuthuzela zizitshixo ezibalulekileyo. Ngaba siza kuqala?
1 Eyona desktop yokudlala ibalaseleyo
3 Ukubeka iliso
Eyona desktop yokudlala ibalaseleyo
Ukuba sithambekele kwitafile uqobo, Itafile efanelekileyo yomdlalo weqonga yenye yeemilo ezi-L. Izizathu zicacile, kodwa sisazakubonisa ukuba iya kubonelela ngokufikeleleka okukhulu kuzo zonke izixhobo, izixhobo kunye nezinye esinazo kwidesktop. Ngapha koko, le tafile kufuneka yanele banzi kwaye banzi, kuthintelwe ukuba izinto ezifakwe kuyo zikhuphe ukuziva ngathi "kukuxinana". Itafile enemilenze emine ikwayidesika, nangona kunjalo, ayisiyiyo loo nto, kodwa mayela nokwenza indawo ye-ergonomic kunye nokukhululeka.
Kubalulekile ukuba le tafile ibandakanye imingxunya yokugqithisa iintambo ke ukuze iintambo zombane kunye nezinye izihlanganisi zingabonakali kwaye ngaphandle kokuthatha indawo etafileni. Umbuzo wobuhle, kodwa ukwangumbuzo osebenzayo.
Ngokuphathelele iinyawo zetafile, sele sikhankanyile "iinyawo ezine", kodwa oko akulunganga. Ingcebiso elungileyo kukuba unayo isifuba seedrowa kwelinye lamacala, ngokukhethekileyo ukuba isebenza njengenkxaso yebhodi kwaye idityaniswe nayo. Ngale ndlela siya kuba nayo yonke into enokusidinga.
Kwelinye icala letafile kuya kuba kufanelekile ndinendawo eyaneleyo yenqaba yekhompyuter, kungcono ukuba iphakanyisiwe ngokubhekisele emhlabeni. Ngale ndlela siza kuba nokufikelela ngokulula kweli candelo libalulekileyo.
Ukubuyela kumphezulu wetafile, kubalulekile ukuba ufumane i- indawo yokubeka iliso. Kwimarike yangoku ungazifumana kwiindlela ezininzi, uyilo kunye namaxabiso, kodwa kuyathakazelisa ukuba uphakamisa iliso ngokwaneleyo ukuze libe kwinqanaba lemehlo akho. Ukongeza, iya kuba yinto yokudibanisa ukuba iqanda ngaphantsi, ukuze ukwazi "ukufihla" into ongayisebenzisiyo ngawo onke amaxesha, kwaye idesktop yakho yokudlala iya kujongeka icace gca kwaye icwangciswe kakuhle.
Enye intsika ebalulekileyo yedesika elungileyo yokudlala sisihlalo. Ukuthatha ingqalelo ukuba uza kuchitha iiyure ezininzi phambi kwesikrini, udinga isitulo sedesika eyenzelwe ngokukodwa iiseshoni ezinde, bekhululekile kwaye ergonomic. Umzekelo kwi Livingo eSpain banokukhetha okuhle.
Xa ukhetha isitulo sakho somdlalo weqonga kufuneka uthathele ingqalelo ngaphezulu kwayo yonke le miba mibini. Ekuqaleni, oko kukuhlengahlengiswa kobude, ukuze ukwazi ukuziqhelanisa nobude betafile yakho kunye nokubeka esweni. Kwaye okwesibini, ene-backrest ehlengahlengisiweyo Uyakwazi ukuphendula kubume bomzimba wakho, kwaye nge umqamelo ukuphakama-adjustable oqinisekisa inkxaso empontshwa. Ngale ndlela kuphela unokuqinisekisa ukuba uyakugcina isimo esifanelekileyo, esifanelekileyo nesichanekileyo somqolo wakho, esilungele ukuchitha iiyure kunye neeyure udlala imidlalo oyithandayo ngaphandle komngcipheko.
Eminye imiba ekufuneka uyiqwalasele kakhulu xa usiya kuthenga isitulo sakho sokudlala zezi:
Oko ine umqamelo wentamo ubude bayo unokuyilawula ukuthintela iintlungu zentamo, ukuqina, njl.
Oko ine amavili amahle, ukumelana kunye nokushenxisa ngokulula okuququzelela ukuhamba kwakho.
Oko padding Ulwandle bekhululekile kodwa beqinile, ngokukhethekileyo i-foam okanye ikotoni.
Okwakhe indawo yokubeka izixhobo kwaye ezi ziyalungelelaniswa ukuphakama
Ukuba izinto ezenziwa ngayo kulula ukuyicocaUmzekelo, polyurethane.
Asiyi kungena kwiinkcukacha zobuchwephesha ekufuneka zinikezwe yikhompyuter elungileyo, sele uyazi kakuhle, kwaye ingcono kunam, kodwa siza kuthetha ngayo Iliso. Into esisiseko ekubekweni esweni kukuba, ukongeza kubungakanani bayo kunye nomgangatho wayo womfanekiso, onayo amaxabiso aphezulu okuhlaziya. Ukuthatha ingqalelo ukuba ukubekwa esweni okuqhelekileyo kuhamba malunga ne-75 okanye i-100 Hz, kuya kufuneka uphakamise loo frequency ukuya kwi-Hz eyi-144. Ewe kunjalo, sukujongela phantsi ukhetho lwe-3D esweni nokuba.
Malunga ne izixhobo peripheral, ezi zibalulekile kulo lonke umdlalo. Iinkampani ziyayazi le nto kwaye ezinye zazo zenze iimpuku kunye neebhodi eziphambili ezenzelwe ukonyusa ukusebenza nokuba kukutya kwiindidi ezithile zemidlalo. Iimpuku ezinamaqhosha acwangcisiweyo kwimidlalo enabalinganiswa abaninzi abanezenzo ezininzi ezikhoyo, iimpuku ze-ergonomic, volante kwabo bathanda imidlalo yeembaleki, njl.
Ewe kunjalo, nayo ukhuko Kuya kufuneka kube kukhethekileyo, kubanzi ukuvumela inkululeko enkulu yokuhamba, kwaye ngakumbi kubukhali ukonyusa ukuchaneka kwemipu yakho kwimidlalo yokudubula, umzekelo.
Xa kuziwa kwikhibhodi, kuya kufuneka ukhethe ifayile ye- ikhibhodi yoomatshini Ewe, isitshixo ngasinye sinesitshintshi saso, kwaye ixesha lokuphendula lifutshane. Kwakhona, ukuba inemibala eyahlukileyo yokwahlulahlula imimandla okanye inkqubo ye-backlight ye-LED, kungcono ILogitech, iRazer, i-LG, iCorsair okanye iMicrosoft zezona zinto zilungileyo ngokolu hlobo lweepheripherali.
Njengoko ubona, ezi zilula kakhulu kwaye zinengcebiso ezisengqiqweni onokuthi usete kuzo idesktop yokudlala oya kuthi ukonwabele njengoko ungazange wacinga ngaphambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Videogames » Olona qeqesho lungcono ukunyusa idesktop yokudlala
Abalawuli abathathu abatsha abafanelekileyo bafika kwi-PlayStation 4
I-NVIDIA ayizukuhlaziya iitafile zayo zeShield kwi-Android 8.0